विश्वकप फुटबलः कुन खेलाडीको कुन पक्ष मन पर्छ ? सेलिब्रेटीका राेजाइ यस्ता छन् - Everest Dainik - News from Nepal
विश्वकप फुटबलः कुन खेलाडीको कुन पक्ष मन पर्छ ? सेलिब्रेटीका राेजाइ यस्ता छन्
याे पनि पढ्नुस विश्वकप फुटबलमा बाजी लगाउने २ मुखियासहित तीनजना पक्राउ !
याे पनि पढ्नुस विश्वकपमा ‘हट’ सुन्दरीको फोटो नखिच्न फिफाको चेतावनी !
यो सामग्री कान्तिपुर साप्ताहिकबाट लिएका हौं ।
ट्याग्स: Fifa world cup 2018, विश्वकप फुटबल, सेलिब्रेटी